आज मार्च ८ अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। महिला अधिकार र सहअस्तित्वका खातिर १९०८ मार्च ८ का दिन अमेरिकाका विभिन्न शहरहरुमा श्रमिक महिलाहरुले गरेको विद्रोहको सम्झनामा ’मार्च ८’लाई वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रुपमा संसारभर मनाइन्छ। विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्तिपश्चात् नेपालमा पनि महिला अधिकार पेचिलो बहसको विषय बन्दै गइरहेको छ। संविधानले त महिलाका हकअधिकार सुरक्षित गरेको छ। तर समाजमा दिनहुँ हुने महिला हिंसाका घटनाले समाजको भविष्य र सुसज्जित समाज निर्माणमा सधैं शंका उत्पन्न गराइरहन्छ।
जब महिला अधिकारको कुरा आउँछ, तब लैङ्गिक समानताको प्रश्न उठ्ने गर्छ। समाजको गठन, रुढिवाद र अविकसित पुँजीवाद लैङ्गिक असमानताका द्योतक हुन् नै। तर महिला अधिकारलाई लैङ्गिक समानतामा मात्रै सीमित गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। समान हुनु भनेको उत्तिकै सबल हुनु पनि हो। निर्बल पक्ष सबल हुन प्रगति चाहिन्छ र प्रगतिको एउटै सुत्र स्रोतको परिचालन हो। स्रोत परिचालनका निम्ति स्रोतसम्मको पहुँच चाहिन्छ र पहुँच स्थापित गर्न दृढ इच्छाशक्ति एवं वैचारिक स्पष्टता चाहिन्छ। यहाँ प्रश्न नेपाली महिलाहरु स्रोतको विकास गर्न र प्राप्त स्रोत परिचालन गर्न कति सक्षम छन् ? भन्ने हो। आधुनिक नेपाली महिलाहरुको प्राथमिकता के छ, र के हुनुपर्छ ? महिला अधिकार र सशक्तिकरणका सवालमा आज सबैभन्दा धेरै बहस हुनुपर्ने विषय यो हो।
एउटा स्थापित मान्यता छ, जिम्मेवारीबोधले मानिसलाई सफल बनाउँछ। समाजको वस्तुगत अध्ययन गर्दा पारिवारिक जिम्मेवारीबोध भएका महिलाहरु तुलनात्मक रुपमा सफल देखिन्छन्। ज्ञान, सीपको विकाससँगै राजनीतिक सामाजिक अग्रसरता उनीहरुमा नै धेरै देखिन्छ। अतः त्यहाँ प्रगति देखिन्छ र आर्थिक सामाजिक सबलीकरणमार्फत् धेरै हदसम्म समान अधिकार प्राप्त गर्न उनीहरु सफल भएका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि जडसुत्रीय चिन्तन, आत्मकेन्द्रित मानसिकता र परनिर्भरता आधुनिक नेपाली महिलाहरुका लागि चुनौति बनेका छन्। समाज निरपेक्ष हुँदैन। समाजमा जहिले पनि सबल पक्षको दुर्बल पक्षमाथि प्रभाव रहन्छ। जहाँ दुई व्यक्तिबीच ज्ञानको असमान वितरण भएको हुन्छ, स्वभाविक रुपमा त्यहाँ बहस हुँदैन। अधिकारको वितरण भनेको शक्तिको वितरण पनि हो। परस्परमा हेर्दा जहाँ शक्तिको असमान वितरण हुन्छ, त्यहाँ समानताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। कतै नेपाली महिलाहरु पनि शक्तिको समान वितरण चाहिरहेका छैनन् या डराइरहेका छन् ? यदि त्यसो हो भने त्यो पराजित मानसिकता हो।
नेपाली समाजको एउटा दृष्टान्त भन्छु। आजको आधुनिक समाजमा पनि एउटी महिला आफ्नो जीवनसाथी किन शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबले आफूभन्दा सक्षम खोज्दैछिन् ? यो परनिर्भरता र दासी मानसिकताको उपज होइन ? दमनका लागि त समाजलाई दोष लगाउन सकिन्छ। तर दासत्व आत्मसमर्पण हो। तसर्थ यो युगका महिलाले अब हिम्मत गर्नैपर्छ परनिर्भरता त्यागेर आत्मनिर्भर बन्न। प्रत्येक महिलाले आफैसँग युद्ध लड्न जरुरी छ। आफूभित्रै मनोवैज्ञानिक, साँस्कृतिक र विचारधारात्मक क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबलीकरणमार्फत् आफ्नो अधिकार आफैँ स्थापित गरेर समाजलाई नेतृत्व दिन जरुरी छ। सधैँ सहानुभूति थापेर प्याला त भरिएला, घैला भरिँदैन।
अन्त्यमा, आधुनिक नेपाली महिलाहरु सामाजिक उत्तरदायित्व बोधसहित जीवनको सार्थकता खोजुन्, परनिर्भरतामा रमाएर पुँजीवादी समाजको दास नबनुन्। ११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सबैमा शुभकामना।